China Mepụta Mpempe akwụkwọ nkeonwe nkeonwe N'ogbe ahịa nku anya ụgha Mink ụlọ ọrụ na ndị na -emepụta | Weiti
Mepụta nkeonwe Label lashes N'ogbe ugha nku anya mink
1, ụdị EDITH 3d obere mink nku anya ụgha & akwa nchara dị nro
2, 100% obi ọjọọ ejiri aka mee n'efu
3, nku anya akara aka nkeonwe nwere igbe nkwakọ ntutu
4, ọnụahịa ụlọ ahịa na -ere ahịa ozugbo
100% ezigbo mink fur
√ Dị nro & ntụsara ahụ
Hazie akara onwe
100% ezigbo obi ọjọọ mink n'efu
Igbe nbinye ahaziri iche
Foto efu na imepụta akara ngosi efu
Site na DHL, FedEx, UPS, EMS, SF, TNT, N'OZI
3-5 ụbọchị ọrụ maka ngwaahịa dị njikere, 7-20 ụbọchị ọrụ maka ahaziri
T/T, Paypal, West Union, Kaadị akwụmụgwọ
Ihe ịchọ mma etemeete zuru oke
2. nku anya ụgha na -eme ka anya gị na -enwu gbaa ma na -adọrọ adọrọ, na -agbanwe anya gị, nku anya buru ibu na nke bara ụba, na -ekepụta mmetụta siri ike. N'ezie mesie anya ike. Ọ dị mfe itinye ma wepu ya, ọ dị nro ma dịkwa mma na -enweghị mmebi ọ bụla n'anya.
Ihe ngosi 3D dị egwu
1.Enweta mmetụta 3D na -enye gị nlele kachasị mma ị nwere ike iche n'echiche. Ọ dị fechaa ma dịkwa mfe iji, nku anya ụgha ga -agwakọta nku anya gị nke ọma, na -enye ohere kachasị mma mgbe ị na -eyi nku anya na enweghị ahụ iru ala mgbe ị na -eyi ogologo oge.
4.4.Eche ọ bụla nke nku anya ụgha 3D anyị bụ ndị ọrụ anyị ji aka mee. Nkwenye nke ịdị mma, hazie nku anya gị site na ịbecha nsọtụ ya ka ọ dabara ogologo ị chọrọ.
Nhazi pụrụ iche
3.3. nku anya ụgha ejiri mee, nke kacha atọ ụtọ ma na -atọ ụtọ. Nkà mmụta sayensị na -eme ka ọ dị mfe ịrapara n'anya.
Mmepụta ọtụtụ akwa, eke na ndụ dị ka uwe, na -eme ka anya gị na -enwu ma maa mma.
Emere site na 100% mink ntutu obi ọjọọ n'efu, dị nro ma dịkwa mma iyi.
N'ihi anya na ihu ọma ndị mmadụ dị iche iche, ahaziri ogologo dị iche iche iji gboo mkpa gị.
Hair 100% ezigbo mink ntutu
Akwa na akwa dị nro
√ Ogologo oge ruo ugboro 25-30
Fiber Eriri sịntetị na -adịghị mma
Eriri siri ike na eriri na -adịghị mma
Iber Fiber dị mfe imebi
LOGO omenala nkeonwe
Ahaziri onwe nkeonwe dị. Ndị otu anyị na -emepụta ihe nwere ike na -akwado ihe ngosi akara gị, ihe nkwakọ ngwaahịa nkuchi anya na ntinye atụmatụ.
Iji hụ na lashes dị elu, site na ihe ahụ ruo ngwaahịa nku anya dị njikere, ndị otu nyocha anyị kewara n'ime otu 3 iji chịkwaa ihe ahụ nke ọma, lashes nke emechara nke ọma, mma lashes emechara. A ga -edepụta ọkwa ọ bụla na akwụkwọ njikwa mma.
Ihe ntutu anya
Mmecha Lashes ọkara emechala
Otu esi etinye nku anya ụgha
Ịmata nku anya ụgha kwesịrị ekwesị maka ọdịdị anya gị.
Dabere n'ụdị anya gị, hụ na ị họrọ ahịrị warara nke ziri ezi. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anya mkpuchi gị kpuchiri ekpuchi, mgbe ahụ, nku anya nku anya toro ogologo nwere ike ịka mma. Ọ bụrụ na ị nwere ọdịdị anya gbara agba gburugburu, gaazie maka lashes dị mkpụmkpụ nke na -enye olu ka ukwuu.
Gbaa mbọ hụ na ebe ọrụ dị ọcha na nke ọma
Lee, enwere m ọtụtụ nsogbu mgbe m hụrụ onwe m ka m na -eme ngwa itinye ntutu anya ụgha n'ime ụlọ na -enweghị ọkụ ebe mụ na ndị enyi m na -eche n'iwe na m na -agara ọkara otu awa ọzọ. Ọ dị mfe ichefu na anyị na -ejikwa iberibe ihe dị nro, na -eji ọkụ agba glam ga -enyere aka hụ na ị na -edozi lashes nke ọma ma hụ na itinye gluu ntutu anya ga -enweghị ntụpọ.
Jiri tweezers jiri nlezianya kpochapụ lashes na tray.
Ọ dị mkpa ebe a ka ị na -eburu lashes site n'akụkụ akuku mmachi ma zere iburu ya site na ntutu anya n'onwe ya. Nke a bụ n'ihi na ọ nwere ike mebie ntutu anya tupu ị nwee ohere itinye ha.
Nweta ogologo nke ọma!
Iji hụ na ọ dabara nke ọma, jiri njigide dị n'ime (nke dị gịrịgịrị) wee kpachie anya gị n'anya karịa ebe ntụpọ gị siri ike. Ọ bụrụ na mma ahụ dị ogologo karịa nkuchi anya gị, bepụ oke ngafe na nsọtụ mpụga.
Ozugbo ị nwere lashes ụgha gị zuru oke nke etinyere na nkuchianya gị, gbakwunye akwa eyeliner wee tinye akwa mascara, dịka ị ga -eme. Enwere onwe gị ịkpụcha nku anya gị nke ọma ma ọ bụrụ na ị na -enwe ntakịrị 'mmezi' ahụ.
Tinye gluu ntutu anya
Na -ejigide mma ịsa ahụ, tinye akwa mkpuchi na -adịghị mma n'akụkụ eriri adịghị mma. Nke a yiri ihe dị mfe mana cheta na dị ka ngwa nrapado niile, obere ihe ka ukwuu.
N'iji onye na -etinye ihe ma ọ bụ obere ahịhịa, tinye naanị ntakịrị mkpa nke gluu n'akụkụ eriri adịghị mma site na njedebe ruo na njedebe. Ihe nyagide ga-agbasi ike nke ukwuu iji hụ na ntutu anya ụgha na-adịte aka. Mgbe ahụ chere naanị sekọnd ole na ole ruo mgbe nrapado ahụ ga -adị mma.
Otu ihe dị mkpa ebe a, etinyela nrapado ozugbo na nkuchianaya. Ihe nyagide ga -akpọnwụ na ịdị irè ya ga -ebelata ngwa ngwa. Ị nwekwara ike imebi nkuchianya na anya gị.
Tee nku anya ụgha
N'iji tweezers gị, kpachapụ ahịrị ahụ nke ọma n'etiti na site n'ihu. Jiri nlezianya debe eriri mmachi ahụ ozugbo na akpụkpọ ahụ dị n'elu lashes nke aka gị. Jiri nwayọ kwatuo ntutu anya ụgha site na njedebe ọ bụla iji bịaruo nku anya anya gị nke ọma dịka ị nwere ike.
Ozugbo ị nwere obi ụtọ na idobe ịkwa ahụ, tinyezie nrụgide dị nro n'ofe ahịrị adịghị mma maka sekọnd ole na ole ruo mgbe ọ ga -amalite. N'ikpeazụ, jide akụkụ ahụ adịghị mma ahụ maka sekọnd ole na ole ọzọ iji hụ na ọ dabara.
Ngwakọta wee gwakọta ọzọ!
N'iji mascara, metụ nku anya ụgha anya ka ọ hụ na ọ na -agwakọta na ezigbo lashes gị. Ị nwekwara ike iji eyeliner gafee ụgbụ adịghị mma ụgha iji nye ya ọdịdị mara mma na ezigbo ya. Dị ka o kwesịrị ịdị, nke a na -emetụta n'ezie ka ị chere na ọ dabara na enweghị ngwakọta nwere ike ịchọrọ.
N'iji mkpịsị aka gị, kpachara anya na -amanye lashes iji gbaa usoro ahụ ume. Nke a ga -enyere aka nye ha nlele nke obere olu ma mee ka ha dị elu tupu nnukwu abalị dị n'ihu.
Nku anya ụgha anyị agafeela asambodo RoHS, enwere ike ijide gị maka ịdị mma na nchekwa ngwaahịa anyị.
Maka ịjụ ajụjụ ọzọ, a na -anabata gị kpọtụrụ anyị maka nkọwa ndị ọzọ n'oge ọ bụla. Ndị otu ahịa anyị ga -aza ajụjụ gị niile n'ime awa 24.
Nke gara aga: Igbe igbe aha nkeonwe ahaziri iche 3D lashes 100% ezigbo ndị na -ere nku anya mink
Osote: Ụdị ALLISON N'okwa Nlekọta Nkeonwe 25mm Mink nku anya ụgha
nku anya n'ùkwù
N'ogbe ahaziri Private Label Igbe 3D Las ...
Ọcha ọkụ 3D Mink nku anya N'ogbe 100% ezigbo ...
mink lashes, Mgbatị ntutu anya, egbugbere ọnụ, Anya anya, Ndị na -ere ntutu anya, eyeliner,